Canicula: waa maxay, astaamaha, asalka iyo cawaaqibta | Saadaasha Shabakadda
Markii aan ka hadlayno saadaasha hawada, waxaa jira noocyo kala duwan oo ifafaale ah oo sannad kasta dhici kara oo leh asal iyo astaamo u gaar ah. Maanta waxaan ka hadli doonaa Canicula. Magacani wuxuu kor u qaadayaa eeyaha oo halkaasuu joogaa waxay umuuqataa inuu soo baxay soosaarkii "maalin eygii ka hor". In kasta oo eeyadu wax yar ka qabtaan macnaha kuleylka. Maalmaha eygu waa xilli ay aad u kulushahay oo loola jeedo xiddigga Silvio ee ku jira xiddigta Canis Maior, oo maalmahan aad ugu iftiimaya cirka.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa waxa uu yahay canicula, astaamaha iyo asal ahaan.
2 Waqtiga Canicula ee Spain
3 Mawjadaha kuleylka iyo kansarka
4 Heerkulka sare
Marka xilliga xagaagu yimaado, xiddigtu waxay gaaraan heerka ugu sarreeya ee balaayiin cirka ah. Muuqaalka Siirius wuxuu ka dhigay in awoowayaashu ay gariiraan maaddaama macnaheedu yahay inay aad u kululaanayso. Waxaa loo yaqaanay gubida. Xiddiggan, oo dhalaalaya, waxaa loo haystay inuu sii deyn doono kuleyl badan oo la socda qorraxda. Labaduba waxay abuureen kuleyl ka dhigay maalmahaas kuwa ugu kulul sanadka oo dhan. Maanta maalmaha ugu kululaa kuma soo beegmayaan helitaanka helikalka ee Sirius, oo la arkay horraantii Sebtember. Si kastaba ha noqotee, canicula-ka ayaa sidaa ku dhex galay dhaqanka oo sii wadaya in la isticmaalo.
Waqtiga Canicula ee Spain
Canicula waa wax aan ka badnayn xilliga tirakoobka ugu kulul sanadka. Isbaanishka waxaan haysanaa maalmaha ugu kulul sanadka inta udhaxeysa July 15 iyo Ogosto 15. Bilowgeedu lama jaanqaado bilowga xagaaga waa waxa kaliya, laakiin waa dhexda. Xaqiiqda ah inay sidan ku dhacdo badanaa waxaa sabab u ah seddex arrimood. Waxaan falanqeyneynaa kuwa ugu waaweyn ee ka dhiga kuleylka xagaaga inuusan u dhigmin xagaaga xiddigiska:
Taariikhahaas qorraxdu waxay uga iftiimaysaa cirifka woqooyi mid ka qumman sidii hore. Tani waxay keenaysaa in hilaaca falaaraha cadceedu ay noqdaan kuwo toos ah. U janjeedha falaadhaha qorraxda ayaa aad uga hooseeya xilliga qaboobaha, sidaa darteed waxay sii gudbisaa shucaac aad u tiro badan. Dhawr toddobaad ka dib markay xaaladdan ku jirto, dhulku wuu kululaadaa oo wuu diiriyaa kuleylka. Yaanan iloobin in haddii aan ku darno tan saameynta jasiiradda kuleylka ee magaalooyinka, waxay isu rogi karaan kuleyl aan loo adkaysan karin.
Baddu waxay leedahay heerkul sareeya ficilkeeda heer-kul-kulmeedkuna wuxuu bilaabmayaa inuu yaraado. Waxaan ognahay in bada ay qaadaneyso waqti dheer si ay ulaqabsato si ay u gaarto heerkulka jawiga. Hawada ayaa ka qabowsan ama ka diiran badda. Sidaa darteed, waa in lagu xisaabtamo in si falaadhaha qorraxdu u kululaadaan cufnaanta badda oo dhan, ay tahay in waqti ku filan loo maro.
Dhowr usbuuc ka hor, oo leh diiwaanno hoose dusheeda, Waxay dib u cusbooneysiineysaa jawiga maraya neecaawda badda isla markaana xilligaas aan sidaa u sii badneyn.
Mawjadaha kuleylka iyo kansarka
Maskaxda ku hay in canicula aysan la mid ahayn kuleylka. In kasta oo tan koowaad ay tahay xilli tirakoob ahaan ka diirran oo ku dhacda wax ka yar ama ka yar taariikho isku mid ah sannad kasta, hirarka kuleylku waxay leeyihiin qayb ka sii xeel dheer oo aan kala sooc lahayn. Waa run in munaasabado badan ay ku soo beegmaan waqtiga. Waa wax iska caadi ah in lagu daro xilli ahaan tirakoobka ka sii kulul waxa uu la xiriiri karaa hirarka kuleylka. Kuleylkani wuxuu kordhiyaa celceliska heerkulka oo tirakoob ahaan wuu sii kululaanayaa. Tusaale ahaan, Intii udhaxaysay Julaay 23 iyo 25, 1995, mowjad kulayl ah ayaa reebtay diiwaanno 46 darajo ah oo kujira kormeerayaasha Seville iyo Córdoba.. Qiimayaashani waa kuwo aan caadi ahayn laakiin aad ugama fog yihiin labada darajo ee 43-44 ee caadiyan laga helo taariikhahan. Heerkulkan waxaa badanaa lagu arkaa diiqadda Guadalquivir.
Ahaanshaha bartamaha xagaaga waa caadi in heer-kul-kulmeedyadu ay sare u kacaan oo ay ku sii siyaadaan magaalooyinka. Canicula waxaa sidoo kale loo yaqaanaa inay tahay xilli bartamihii-xagaaga abaarihii uur-dhexaadkii. Badiyaa waxay socotaa ugu badnaan ilaa 40 maalmood waana meesha uu ku jiro heerkulka ugu sarreeya ee neef qabatinku.
Astaamaha aan ka leenahay canicula waxaan aragnaa kuwa soo socda:
Heerkulka ka sarreeya 37 darajo: Heerkulkan ayaa had iyo jeer u soo saari kara xoogaa dhibaatooyin caafimaad dadka ugu nugul. In kasta oo hirarka kuleylku ay ka khatar badan yihiin inuu dhakhso badan yahay, hirarka kuleylku waxay noqon karaan kuwo joogto ah.
Hoos u dhaca roobka: heerkulka sare wuxuu ka hortagaa jiilka daruuraha roobka sababo la xiriira sare u kaca hawo kulul iyo hoos u dhaca kuleylka kuleylka ee deegaanka.
Kulaylka hawada ee xad dhaafka ah: hawadu aad ayey u kulushahay oo waxay u wareegeysaa hal meel oo deg deg ah.
Cirka oo gebi ahaanba cad: wuxuu la xiriiraa kor. Heerkulka sare wuxuu yareeyaa sameynta daruuraha roobka.
Canicula-ka waxaa caadi ah in laga helo magaalooyin dhowr ah oo ku yaal Spain heerkulbeegyadu waxay taabtaan ama xitaa dhaafaan 40 darajo. Saadaasha qaarkood badiyaa waa 45 darajo, gaar ahaan haddii aad ku darto saameynta mowjadda kuleylka kuleylka buuxa. Kulaylkan sare waxaa weheliya dab iyo abaaro. Abaaruhu waa xilliyo halis ah oo saameeya dhirta iyo ilaha biyaha ee aadamuhu.
Dabcan, waa in la sheegaa in isbeddelka cimilada uu kasii darayo xaaladda canicula sannad kasta. Taasi waa, waxaa jira heerkul ka sarreeya celcelis ahaan 40kan maalmood marka loo eego kansarka sida caadiga ah socda.
Qaar ka mid ah talooyinka la siiyo si loola dagaallamo maalmahan kuleylka daran, waa kuwan soo socda:
Ka fogow soo-gaadhista qorraxda, gaar ahaan duhurkii, oo ah marka falaadhaha qorraxdu yeeshaan jaangoyn hooseysa heer kulka-na uu sareeyo.
Cab biyo joogto ah si looga fogaado fuuqbaxa.
Cun cunno cusub
Mari kareemka qorraxda si looga fogaado gubashada
Adeegso dalladaha, Dhar khafiif ah iyo koofiyad si aad uga ilaaliso qorraxda.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto canicula iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Canicula
Taariikh nololeedka Heisenberg